सीमामा भारतको अर्को दादागिरी, नेताहरु बोल्न नसक्दा यति सम्म गर्यो नेपाललाई ! - Nepal Insider
Home/समाचार/सीमामा भारतको अर्को दादागिरी, नेताहरु बोल्न नसक्दा यति सम्म गर्यो नेपाललाई !
सीमामा भारतको अर्को दादागिरी, नेताहरु बोल्न नसक्दा यति सम्म गर्यो नेपाललाई !
नेपाल–भारत सीमा समस्याको प्रमुख कारण पश्चिमी सीमा बिन्दु यकिन नहुनु नै हो। नेपालले आफ्ना प्रमाणका आधारमा गर्दै आएको दाबीलाई भारतले नमान्दा यो समस्यमा आएको हो।
भारतले हडपेको कालापानी र लिपुलेकका विषयमा नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुराको विषयमा सरकार मौन छ, त्यो क्षेत्रसमेत नेपालको भएको प्राचीन दस्तावेजहरुमा पाइन्छ। भारतले कुटियांगदी भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने पाँचवटा गाउँका बासिन्दा अहिले भारतीय नागरिक बनिसकेका छन्। उनीहरुले भारतीय नागरिकता र आधारकार्ड मात्रै पाएका छैनन् राज्यका उच्च तहमा समेत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति छ।
भारत सरकारले प्रशासनिक, शैक्षिक र राजनीतिक स्तरमा त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, आरक्षण पनि दिएको छ। नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना काली नदी नै भएको केही तथ्य फेला परेका छन्। नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि र प्रत्यावर्तन सन्धिले काली नदी सिमा तोकेको छ।
नेपाल र चीनबीच भएको सन्धिको दफा १ को उपदफा १ मा चीनसँगको नेपालको पश्चिमी सीमारेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ भनिएको छ। सो दफामा यो दक्षिणपूर्व कर्णाली (माचपु) नदीका सहायक नदी तथा तिंकर नदी र सेती नदीको पानी ढलो हँुदै लिपुधुरा हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (तिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुजरी उराई (पेल्हिन) भञ्ज्याङतर्फ जान्छ भनिएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
धरानमा नेकपालाई पछि पार्दै काँग्रेसले लियो अग्रता, नेकपा कार्यकर्ता निराश !
बोलेरो जीप दु’र्घटनामा हुँदा बालिकाको मृ’त्यु, पाँच घा’इते
जिग्री-पाँडे र मिडिया हबबीच कुरा मिल्यो
सावधान! तपाईंको नाममा प्यान दर्ता भएको त छैन ? (राजस्व विभागको सूचनासहित)